दाँत ब्रस नगरे: गिजाको समस्यादेखि क्यान्सर संक्रमणसम्म ! – Complete Nepali News Portal
दाँत ब्रस नगरे: गिजाको समस्यादेखि क्यान्सर संक्रमणसम्म !
दाँत ब्रस नगरेको अवस्थामा खानेकुरा मुखभित्र सड्न थाल्छ, जो दुर्गन्धको कारण बन्छ । त्यसैले खाना खाएपछि ब्रस गर्नुपर्छ । तर, मुख सफा गरेको अवस्थामा पनि दुर्गन्ध आउँछ भने अरु थुप्रै कारण हुनसक्छ ।
गिजाको समस्या -गिजाको समस्याका कारण पेरिओडोन्टिक नामक रोग लाग्ने गर्छ । जुन मुख गन्हाउने समस्याको कारण बन्न सक्छ ।
फोक्सोको संक्रमण- कयौ मानिसहरु सास गन्हाउने समस्यालाई सामान्य नै मान्ने गर्दछन् । जबकी फोक्सोको संक्रमण भएमा पनि मुखबाट गन्ध आउने गर्छ ।
कलेजोको संक्रमण – शरीरको महत्वपूर्ण अंगहरुमध्ये कलेजो पनि एक हो । कलेजोले खानालाई पचाउन सहयोग गर्दछ । तर कलेजोको संक्रमण भएको खण्डमा यसले राम्ररी काम नगर्दा अपचको समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । जसका कारण मुख तथा सासबाट गन्ध आउने गर्छ ।
मिर्गौंलाको समस्या – मृगौलाको समस्याका कारण शरीरमा मेटाबोलिक परिवर्तन देखा पर्दछ । जसले गर्दा शरीरमा मुख सुख्खा हुने समस्या आउने गर्छ , जसका कारण मुखबाट गन्ध आउने गर्छ ।
मधुमेह – मधुमेहका कारण शरीरमा मेटाबोलिक परिवर्तन देखा पर्न थाल्छ । जसको कारण मुख गन्हाउन थाल्छ ।
क्यान्सर – लामो समयसम्म चुरोट तथा खैनीको सेवन गर्ने मानिसहरुमा मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । यस्तोमा उनीहरुको मुखबाट नराम्रो गन्ध आउने गर्छ ।